Ko covid-19 yachinja sei ruzivo rwevatengi | ECommerce nhau
Ko covid-19 yachinja sei ruzivo rwevatengi
ECommerce nhau | 01/10/2021 00:14 | eCommerce
Mazuva ekutanga uye vhiki dzechirwere akamanikidza makambani kutanga shanduko dzakakosha kune ruzivo rwevatengi. Rinopfuura gore gare gare, nenjodzi dzekuratidzwa dzichiri dzakakwirira uye kunyangwe hazvo chikamu chekubaya nhomba chakakwira munzvimbo zhinji dzenyika, zhinji dzeshanduko idzi dzave tsika.
Uye nekuti tsika dzinowanzoomerera, kunyangwe nemajekiseni, maindasitiri mazhinji anotarisana nemaonero akasiyana eramangwana. Saka kambani ingaite sei iyo bharanzi kune iyo nyika yakatoshanduka? Heano mamwe matipi emakambani anotarisa tungamira yako yenguva refu yevatengi ruzivo maitiro.
1 Gamuchira ruzivo rwevatengi vepamhepo
2 Chengetedza chiitiko chiri-chemunhu
3 Zvakanakisa zvepasirose
Gamuchira ruzivo rwevatengi vepamhepo
Sezvo hwakawanda hupenyu hwachinja online uye hwakawanda hwayo hunogona kuramba huri online mune ramangwana, inguva yekuona kuti iyo online mutengi ruzivo yakagadzirirwa nechengetedzo imwecheteyo seyakatarisana kumeso.
Pamberi pe COVID-19, vatengi vazhinji vakaita sarudzo dzekutenga muchitoro, vachisarudza zvigadzirwa zvichibva pane zvavakaona, zvavakabata, uye vachienzanisa pamashefu. Nekuda kweizvozvo, makambani akaisa mari muzvirongwa zvekuisa masherufu, kushambadzira mu-chitoro, uye kutengesa-kwekutengesa kutengesa kutyaira nekutengesa.
Zvino, vanhu vazhinji vanoodha online, saka danho rese rezvisarudzo rakasiyana nevatengi.
Dhirivhari nekutora zvawedzera matanho matsva, uye vanhu vatsva, kune ruzivo rwevatengi. Zvitoro zvino zvazara nevashandi uye makondirakiti vachiisa maodha evatengi. Vatengi ava ndivo kunyanya kufarira kumhanya uye kunyatsoita kupfuura mabhageji, saka ivo havafurirwa nekusimudzirwa. Vatengi vese vanoda izvo zvigadzirwa zvirimo, ayo ari nyore kuziva, akajeka uye akapusa.
Chengetedza chiitiko chiri-chemunhu
Hapana mubvunzo kuti mune-munhu mutengi ruzivo rwakagamuchira kwakanyanya kukanganisa kubva padenda. Uye kune vazhinji vatengesi, izvo zvekutengesa ruzivo zvaigara zvichikosha. Iye zvino kunyangwe ukaenda kuchitoro, ndizvo chiitiko chakasurukirwa uye zvakasiyana zvakanyanya pakuvaka mhando.
Vatengi vanoda kuziva kuti kambani ine hanya navo, zvichipa kusava nechokwadi kuripo izvozvi.
Zvakadaro, haigone kuve yese yekuchenesa maoko uye isina dhizaini, kunyanya kune zvigadzirwa zvine simba kukwezva kwepamoyo uye uko kushandira vatengi kunowanzo kuve kushoma kwekutengeserana uye kune hukama zvakanyanya. Aya makambani anofanirwa kunge achinyanya kugadzira mu chivakwa chechiratidzo.
Vachawana ruzivo rwevatengi senge misika yevhiki inonamira here? Izvo zvakakosha kuti urangarire kuti inogara ichichinja nharaunda zvinoreva kugara nguva mikana yekudzidza uye kugadzirisa.
Pakupedzisira, seguruva reiyo nyowani post-COVID chaiyo inogadzikana, masangano akaedza achave nemamwe maturusi mazhinji avanogona.
Semuenzaniso, dzidzo yakagara ichionekwa seindasitiri isingagadzirise shanduko: Vadzidzisi vanoona ruzivo rwavanoda kudzidzisa, vanogadzira nzira yekudzidzisa izvo zvinyorwa, vozozvipa kuvadzidzi mukirasi. Shanduko yekudzidzira kure yakachinja izvo. Mukuita izvi, yaratidza mikana mitsva yenzira dzinofambidzana nevadzidzisi nevadzidzi.
Wese munhu akamanikidzwa kuita zvinhu zvaasina kumbofunga kuita uye izvo zvakadzidzwa ndezvekuti mazhinji eaya matekinoroji matsva anotendera iwe kuti uite zvinhu zvanga zvisati zvamboitika kare - zvinhu izvo munzira dzakawanda zviri kure zvakanyanya kupfuura zvawaimboita iwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Ko covid-19 yachinja sei ruzivo rwevatengi
Matipi ekubudirira mukambani yako yekambani kuvimbika zano
Chigadzirwa chigadzirwa: Chii icho, nzira yekusarudza, maitiro ekukura